MANTASOA YOKUPHUMULA - I-Airbnb
Mantasoa, Antananarivo Province, i-Madagascar
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Hanitra
U-Hanitra Ungumbungazi ovelele
I-villa enesitezi esilungiswe ngokuphelele, evulekele ngaphandle ngenxa yamafasitela amakhulu e-bay kanye nokubukwa okumangalisayo kwechibi. Woza uzojabulela umoya omusha, ukuthula nokuthula amahora angu-2 ukusuka e-Tana.
Indlu ihlukaniswe yaba yizindawo zokuhlala ezizimele ezi-2 futhi ithatha abantu abayi-10.
I yokuhlala 1st abantu 6 siqukethe egumbini lokuphumula nge eziko 2 embhedeni imibhede, 1 lokulala 1 umbhede double, 1 lokulala 2 imibhede ayiwele naye, ikhishi ifakwe (igesi isitofu nge eziko, ikhofi umenzi, iketela), yokugezela. Amanzi nge ishawa kanye ne-WC.
Indawo yokuhlala yesi-2 yabantu abangu-4 inegumbi lokuhlala elineziko nemibhede emi-2, ikamelo lokulala eli-1 elinombhede ophindwe kabili, ikhishi elihlomele (i-gas hob, umenzi wekhofi, iketela) elivulekele igumbi lokuhlala, igumbi lokugeza eline-WC.
Isikhala esikhulu esiluhlaza esoso inyama yangaphandle, kuhhavini wePizza.
Ngalé kwengadi, ungathatha uhambo lokuzungeza ichibi, noma emanzini (isikebhe esihamba ngezinyawo nezikebhe ezi-2 ezitholakala kubahambi). Kungenzeka futhi ukuqasha isikebhe ukwenza imisebenzi yamanzi (buoy inflatable, ride, ...).
Indlu itholakala kahle imizuzu eyi-15 ukusuka eHermitage.
Umnakekeli nomkakhe bazobe bekhona ukuze bakwamukele futhi bazotholakala ngokugcwele ukuze bakusize ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Futhi siyatholakala ngocingo futhi singakhululwa uma kunesidingo.
UHanitra Ungumbungazi ovelele